Bit By Bit - Isingeniso - Yini okufanele ufunde ngokulandelayo
I-encry blot (isigaba 1.1)
Ukuze uthole incazelo eningiliziwe yephrojekthi ye-Blumenstock nozakwabo, bheka isahluko 3 sale ncwadi.
Siyakwamukela ku-digital age (isigaba 1.2)
Gleick (2011) inikeza ukubuka konke okungokomlando kwezinguquko kumandla omuntu ukuqoqa, ukugcina, ukuthumela, nokucubungula ulwazi.
Ukuze uthole isingeniso kuminyaka yedijithali egxile ezingozini ezimbi, ezifana nokuphulwa kwangasese, bheka u- Abelson, Ledeen, and Lewis (2008) no- Mayer-Schönberger (2009) . Ukuze uthole isingeniso kuminyaka yedijithali egxile ematheni, bheka Mayer-Schönberger and Cukier (2013) .
Ukuze uthole okwengeziwe mayelana namafemu okuxuba ukuhlolwa ekusebenzeni komkhuba, bheka Manzi (2012) , futhi ngokuningi mayelana nokuziphatha kokulandela amafemu ezweni lomzimba, bheka Levy and Baracas (2017) .
Izinhlelo zonyaka yobudala zingaba zomculo kanye nezinto zokutadisha. Isibonelo, ungase ufune ukusebenzisa imithombo yezokuxhumana ukuze ulinganise umbono womphakathi noma ungase ufune ukuqonda umthelela wemidiya yomphakathi ekubonweni komphakathi. Ngesinye isikhathi, uhlelo lwe-digital lusebenza njengethuluzi elikusiza ukuba wenze isilinganiso esisha. Ngakolunye uhlangothi, uhlelo lwedijithali luyinto yokutadisha. Ukuze uthole okwengeziwe ngalolu hlu, bheka Sandvig and Hargittai (2015) .
Umklamo wokucwaninga (isigaba 1.3)
Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nokuklanywa kocwaningo emayelana nesayensi yezenhlalakahle, bheka King, Keohane, and Verba (1994) , Singleton and Straits (2009) , Khan and Fisher (2013) .
Donoho (2015) ichaza idatha yesayensi njengomsebenzi wabantu abafunda kusuka kudatha, futhi inikeza umlando wesayensi yedatha, ukulandela imvelaphi yobuhlakani yasensimini kubafundi abanjengoTukey, eCleveland, Chambers naseBreiman.
Ukuze uthole uchungechunge lwemibiko yokuqala yomuntu mayelana nokuqhuba ucwaningo lwezenhlalakahle eminyakeni yobudijithali, bheka i- Hargittai and Sandvig (2015) .
Izihloko zale ncwadi (isigaba 1.4)
Ukuze uthole okwengeziwe mayelana nokuxuba idatha ekulungele nokugcinwa kwesitoreji, bheka Groves (2011) .
Ukuze uthole okwengeziwe ngokuhluleka "kokungabonakali," bheka isahluko 6 sale ncwadi. Inqubo efanayo efanayo ethi Blumenstock kanye nozakwethu asetshenziselwa ukwehlisa ingcebo yabantu ingasetshenziselwa ukuveza izimfanelo zomuntu siqu ezinokuthi zizwele, okubandakanya ukuma ngokocansi, ubuzwe, imibono yenkolo nezombusazwe, nokusetshenziswa kwezidakamizwa (Kosinski, Stillwell, and Graepel 2013) .